Kumayelana nokuthi umqashi alethe Isidaluli Sokulinganisa Sabaqashi (i-EMP501) esiqonde kahle, kanye neSitifiketi Sentela Yabasebenzi [i-IRP5/IT3(a)s esizokhishwa kanjalo, uma sikhona, neSidaluli Sokuhoxiswa Kwesitifiketi Sentela (i-EMP601).
U-SARS uzokwamukela kuphela Ukulungiswa KweSidaluli Sokulinganisa (EMP701) kokulinganisa okwenziwa eminyakeni ephakathi kuka-1999 -2008. Konke ukulungiswa kwezilinganiso okusukela ngo-2009 kuya phambili kufanele kulethwe nge-EMP501 ebuyekeziwe.
Izinhlaka ezintathu okumele zilingane ukuze okulethayo kuphumelele yilezi:
Ukuletha zidaluli Zabaqashi Zanyanga Zonke (ama-EMP201) [ Izimali ezibanjelwe INhlawulo – Nganzuzo (i-PAYE) kanye/noma Intela Yokuthuthukisa Amakhono (i-SDL), Isikhwama Somshwalense Wokungasebenzi (i-UIF) kanye NoMhlomulo Wentela Yabaqashi (ETI)
Izinkokhelo ezenziwe( kushiya ngaphandle izinkokhelo zenhlawulo nenzalo)
I-IRP5/IT3(a)s njengokushicilelwa kwayo- amanani e-PAYE, SDL nawe-UIF.
Abaqasha kulindeleke ukuba bethule Isilinganiso Sabaqashi Sonyaka seNhlawulo Nganzuzo maphakathi nomhla we-18 kuMbasa kuya zingama-31 kuNhlaba ku-2016 kwa-SARS, beqinisekisa noma belungisa isamba sentela yokuholela abayidalula ngo-2015/2016
Kulo nyaka abaqashi bayanxenxwa ukuba baqinisekise kahle futhi babuyekeze imininingwane yezezimali zomsebenzi ngamunye andukuba balethe kwabakwa-SARS Idaluli Zezilinganiso Zonyaka (i-EMP501) kanye NeZitifiketi Zentelangeniso Zabasebenzi [IRP5/IT3 (a) s].
20 kuMasingana 2016 - I-BRS ka-2017 yezilinganiso ze-PAYE isishicileliwe:
Ukuhlalukiswa Kwezidingo ZaseBhizinisini​
I-BRS – Izilinganiso ze-PAYE zika-2017 KUSHA!​
​2017 Ukulinganisa Kwabaqashi Konyaka
Qaphela – [email protected] yohlobo lwe-6.7.5
[email protected] yohlobo lwe- 6.7.5 nokuyiyo eyakamuva ingasetshenzwelwa ukuletha izitatimende zakho zokulinganisa (EMP501) kanye nazo zonke ezinye izilinganiso nokulethwa impinda.
Abaqashi kudingeka balethe izilinganiso zabo ngaphambi kosuku olushicilelwe KuSomqulu kaHulumeni.
Kufanele kulethwe nini futhi kanjani?
Isilinganiso kufanelwe silethwe kabili ngonyaka wezimali, kulethelwa:
Isithuba sesikhashana– esiyizinyanga eziyisithupha kusukela ku-1 kuNdasa kuya ku-31 kuNcwana
Isithuba sonyaka– esingangonyaka wonke ogcwele kusuka ngo 1 kuNdasa kuya ku-28/29 kuNhlolanja
Ukuhlalukiswa Kwezidingo ZaseBizinisini (i-BRS) kuchaza izidingo zokulethayo kwesitifiketi sentela i-IRP5/IT3(a)s kanye nesilinganiso se-PAYE, se-SDL kanye/noma se-ETI, uma sikhona.
Business Requirement Specification​
BRS - PAYE Employer Reconciliation for 2017​ NEW!​
BRS - PAYE Employer Reconciliation for 2015/16 ​
​2015 Annual Employer Reconciliation
(1 March 2014 - 28 February 2015)​​​​​
2016 Annual Employer Reconciliation
(1 March 2015 - 29 February 2016)
Ukugcwalisa isilinganiso sakho kwi-inthanethi kuyikhethelo elinokushesha, elilula nelinganyinyani. Ungasebenzi-:
Uma unama-IRP5/IT3(a)s angama-20 noma ngaphansi, sebenzisa i-eFiling.
Amakhophi azo zonke izidalulo ezilethiwe kanye noshicilelo olwesekayo (amaphepha afanela) kufanele kulondolozwe iminyaka emihlanu.
Isu-Ngqangi: Uma kwenzeka okulethile kungalinganiseki ngokwezinhlaka ezintathu [i-EMP201, izinkokhelo ezilethiwe kanye ne-IRP5/IT3(a)s)] sizokwazisa ngencwadi.
Last Updated: 14/08/2017 12:55 PM ​